Fransiiska: Ninkii askarta toogtay dambiile horuu ahaa - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, TWITTER
Sawirka ninkii askarta ku toogtay Paris, Kariim Shurfi
Ninkii dableyda ahaa ee askariga booliska ah ku dilay Champs Elysees ayaa dacwad oogaha Faransiisku sheegay in la gartay, magaciisana la odhan jiray Karim Shurfi oo ahaa nin falal dambiyeed maxkamado hore ugu xukumeen.
Dacwad ooge Francois Molin, wuxu warfidiyeenka u sheegay in uu askariga booliska ah ku dilay rasaas uu ka riday qori Kalashnikov ah.
Qoraal lagu difaacayo kooxda la baxday Dawladda Islaamka yaa la sheegay in laga helay maydka ninka askariga dilay oo isna markii dambe la toogtay.
Musharaxiinta u tartamaya doorashada madaxtinimada ee dhici doonta Axadda ayaa lagu eedeeyey in ay dano siyaasadeed uga faa'idaysanayaan weerarkaa dhacay.
Dacwad ooguhu wuxu sheegay in Shurfi hore loogu xukumay afar fal dambiyeed oo uu galay oo diiwaanka ugu jiray.
Dacwad ooguhu wuxu intaa ku daray in ninkan weerarka qaaday uu hore u sheegi jiray in uu doonayey in uu dilo askari boolis ah laakiin aanu jirin xidhiidh muuqday oo uu la lahaa kooxaha Muslimiinta xag jirka ah.
Mr Molins wuxu sheegay in Shurfi mar la xidhay bishii Feeberweri oo gurigiisana la baadhay taas oo qayb ka ahayd baadhitaan lagu hayey warar sheegayey in uu hadal hayey inuu damacsanaa in uu dilo askar boolis ah oo uu doonayey in uu hub helo.